Igama lesayensi: Umbelliferae
Igama elivamile: Iparsley Isitshalo
seParsley sasivela eningizimu yeYurophu naseNyakatho Afrika. Namhlanje itshalwe emhlabeni jikelele ngamaqabunga ayo amasha futhi omisiwe. Kunezinhlobo ezimbili eziyinhloko ze-parsley, i-curly leaf parsley (i-Crispum) esitshalo esicindezelayo, kanti nesipiliyoni esinezintambokazi zase-Italia-leaf parsley (Neapolitanum).
Isitshalo se-parsley yisitshalo se-biennial esikhiqiza amaqabunga aphuzi, anesinamakha futhi anambithekayo ngonyaka wokuqala futhi, uma evunyelwe ukukhula ngomnyaka wesibili, uzoya enzalweni. It has a taproot eqinile okuyinto okumnandi kakhulu uma kuvuna ngonyaka wesibili emva imbewu kuvunwe. Isihlahla se-parsley sikhula sibe cishe ubude obuyi-40 cm futhi sikhiqiza iziqu ezincane ezincane ezincane ezifakwe yiqoqo lamaqabunga.
I-scallop eluhlaza njengamaqabunga e-Italian flat-leaf parsley ithambile futhi iyomzimba futhi ikhetha abapheki abaningi. Amaqabunga amaqabunga e-parsley ayanesibindi kodwa ayenambitheka futhi angasetshenziselwa ukuhlobisa izitsha njengendlela yokubonisa ngoba abukeka elula isikhathi eside.
Abakhiqizi abaningi bayodla i-parsley njengonyaka kanye nokutshala izihlahla minyaka yonke.
I-parsley iyalinywa ngenxa yamaqabunga ayo anamakha, asetshenziswe esisha noma omisiwe ekuphekeni njenge-flavouring noma idliwe ama-Salads aluhlaza.
I-parsley nayo yaziwa ngokuqukethwe kwayo ephezulu yevithamini C.
I-parsley iyona engcono kakhulu emhlabathini owuncibilikisiwe owenziwe ngomhlabathi ukuze uhlale enhlabathini. Ikhula kahle emhlabathini nge-pH ka-6 kuya ku-7.
Lapho ulungiselela inhlabathi endaweni yesitshalo kubalulekile ukwengeza umquba owanele noma umquba emhlabathini. Lokhu kumele kulinywa ngenyanga ngaphambi kokutshala ukuze unike isikhathi somquba ukuxazulula nanoma yikuphi ukhula ithuba lokuhluma. Umhlabathi kumele uchithe isikhathi eside ngesonto ngaphambi kokutshala ukuhlanza ukhula futhi uphelele endaweni yezitshalo. Kancane kancane ku-umanyolo wangaphambi kokutshala kanye nezici zokulandelela ngosuku noma ezimbili ngaphambi kokutshala i-parsley.
Iparsley ikhula kahle emazingeni okushisa ephakathi kuka-14°C no-26°C. Kudinga ukushisa kwenhlabathi ukuhluma kwe-15 kuya ku-20°C. Lesi sitshalo simelana kancane neqhwa.
Ukukhiqizwa kwezebhizinisi ezinye izilimo ezibizwa ngokuthi i-parsley cultivars yi: Idili, i-Champion, i-Evergreen, i-curled yase-Italy, i-Italian Flat, i-Moss, i-Pagoda ne-Curl kathathu
Kungcono ukufuna iseluleko sendawo mayelana nemikhuba ekhulayo evela enkampanini yezinhlanzi ezihloniphekile ukuthi yiziphi izinhlobo ezihlukahlukene kakhulu ezimweni kanye nemakethe okuhlosiwe.
Kungcono ukwazi imakethe ye-parsley ngaphambi kokukhiqizwa.